PUBG Mobile ကိုကစားခြင်းအတွက်အိန္ဒိယတွင်ကျောင်းသား ၁၆ ယောက်အဖမ်းခံရ Androidsis
အိန္ဒိယတွင် PUBG Mobile ကစားခြင်းအတွက်ကျောင်းသား ၁၆ ယောက်အဖမ်းခံခဲ့ရသည်
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်လူအများစုအတွက်မဖြစ်နိုင်ဟုထင်ရသော်လည်းမကြာသေးမီကဖြစ်သည် အိန္ဒိယပြည်နယ်ဂူဂျာရတ်သည်နာမည်ကျော်တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်း PUBG Mobile ကိုပိတ်ပင်ခဲ့သည်ဒီတော့ဒီပြည်နယ်ကလူတွေဟာဖုန်းကိုဖွင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်။
မကြာသေးမီကအကျိုးဆက်အဖြစ် ကျောင်းသား ၁၆ ယောက်ကိုပြည်နယ်အာဏာပိုင်များကမကြာသေးမီကဖမ်းဆီးခဲ့သည်အဓိကအကျိုးဆက်များမရှိဘဲပေမယ့်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
တားမြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းမှာကစားပွဲ၏အပြုအမူ၊ အပြုအမူနှင့်ဘာသာစကားအပေါ်ဂိမ်း၏သက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်း၌ Fortnite နှင့် Apex Legends ကဲ့သို့သောအခြားအသုံးများသော Battle Royale ဂိမ်းများရှိသော်လည်း တားမြစ်ချက်သည် PUBG Mobile ကိုသာသက်ရောက်သည်အဲဒီမှာနေတဲ့သူတစ် ဦး ထက်ပိုသောပန်ကာကိုဝမ်းနည်းစေသည်။ (ရှာဖွေရန် - PUBG မိုဘိုင်းတွင်သင်၏ဂိမ်းမှတ်တမ်းကိုဝှက်ရန်)
ကန့်သတ်ချက်များရှိနေသော်လည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၁၀ ဦး သည်ဆက်လက်ကစားရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသတင်းစာအရသိရသည် အိန္ဒိယ Express ကိုသူတို့အားလုံးဒီလိုလုပ်ခြင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ဂူဂျာရတ်မှာပိတ်ပင်မှုအပြီးတစ်ပတ်အကြာမှာကျော်ကြားတဲ့စစ်ပွဲမှာကစားနေတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူတို့အားလုံးကိုအာမခံဖြင့်ပြန်လွတ်လာခဲ့သည်။ ပြည်နယ်ရဲအရာရှိတစ် ဦး ၏အဆိုအရဂိမ်းသည်အလွန်စွဲလမ်းစေခဲ့သည် စွပ်စွဲခံထားရသောကျောင်းသားများသည်သူတို့အဖွဲ့ကိုသူတို့ချဉ်းကပ်နေသည်ကိုပင်သတိမထားမိကြပါ, ဒါကသူတို့ကတရားမဝင်အမှုကိုလုပ်နေတာဖမ်းမိခဲ့ပုံကို။
၎င်းသည်မကြာသေးမီရက်များအတွင်းတစ်ခုတည်းသောဖမ်းဆီးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုကျောင်းသား (၁၀) ဦး အပြီးတွင်အသက် (၁၈) နှင့် (၂၂) နှစ်ကြားကျောင်းသား (၆) ဦး အား PUBG Mobile ကိုကစားခြင်းဖြင့်ကြာသပတေးနေ့တွင်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ သူတို့ဟာတခြားသူတွေလိုပဲအာမခံနဲ့လွတ်လာခဲ့တယ်.
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအခြားသတင်းများအပေါ်အခြေခံသည် ဂိမ်း beta ကို 0.115 အများအပြားအသစ်အဆန်းနှင့်အတူ။ ၎င်းမတိုင်မှီ PUBG Mobile ကိုနောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်လည်းမွမ်းမံခဲ့သည် Resident Evil ဖုတ်ကောင်စနစ်နှင့်ပိုမိုသောအရာများ. (ဆက်စပ်: PUBG Mobile ရှိ Resident Evil ၏အံ့မခန်းဖွယ်ဖုတ်ကောင်ပုံစံကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အိန္ဒိယတွင် PUBG Mobile ကစားခြင်းအတွက်ကျောင်းသား ၁၆ ယောက်အဖမ်းခံခဲ့ရသည်
Qualcomm မှ ၁၀၀ နှင့် ၁၉၂ MP ကင်မရာများအတွက်အထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မည်